पहिलो त्रैमासमा सूचीकृत १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफा २५.६२ % ले वृद्धि
सबैभन्दा बढी नेको इन्स्योरेन्सको नाफा रू. १२ करोड ४४ लाखभन्दा बढी
मंसिर ७, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) मा सूचीकृत १८ ओटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले चालू आवको पहिलो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजानिक गरेका छन् ।
गत आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीले रू. ७ करोड ५३ लाख नाफा कमाएको थियो । गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवमा कम्पनीको नाफा ६५ दशमलव २१ प्रतिशत वृद्धि भएको हो । त्यसैगरी, दोस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीले रू. १२ करोड २३ लाख नाफा कमाएको छ ।
त्यसैगरी, चालू आवको पहिलो त्रैमासमा १८ ओटा कम्पनीमध्ये दुई ओटा कम्पनीको नाफा गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा घटेको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ भने बाँकीको नाफा १६ ओटा कम्पनीको नाफा बढेको छ । हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा १७ दशमलव ६१ प्रतिशत र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको १५ दशमलव १४ प्रतिशत घटेको हो ।
गत आवको पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफा ५८० प्रतिशत वृद्धि भएको छ । कम्पनीले गत आवको पहिलो त्रैमासमा रू. ७७ लाख ९७ हजार नाफा कमाएकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमासमा वृद्धि भएर रू. ५ करोड ३० लाख पुगेको छ ।
चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको आम्दानीमा वृद्धि भएकाले नाफा बढेको हो । कारोना भाइरसका कारण पनि बीमा कम्पनीहरुले पहिलो त्रैमासमा राम्रो मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् ।